आज च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनल ड्रः यी ८ क्लबबारे जान्नैपर्ने कुरा
एजेन्सी । जारी सिजनको च्याम्पियन्स लिगमा इंग्लिस क्लबको बर्चश्व रहेको छ । क्वाटरफाइनलमा चार वटा इंग्लिस क्लब (म्यान्चेस्टर सिटी, म्यान्चेस्टर युनाइटेड, लिभरपुल तथा टोटनहम) रहेका छन् । त्यस्तै एक स्पेनिस क्लब (बार्सिलोना), एक डच क्लब (आयाक्स), एक पोर्चुगिज क्लब (पोर्तो) तथा एक इटालियन क्लब (युभेन्ट्स) रहेका छन् ।
अन्य सिजनमा स्पेनिस क्लबहरुले च्याम्पियन्स लिगमा बर्चश्व कायम गरेका हुन्थे भने जारी सिजनमा इंग्लिस क्लबहरु बलिया देखिएका छन् । यहाँ हामीले यी क्लबहरु कति तगडा भनेर जानकारी प्रस्तुत गरेका छौं ।
युइएफए बरियताः २२
जारी सिजनको नतिजाः ८ खेलमा जित, ५ खेलमा बराबरी तथा १ खेलमा हार (क्वालिफाइङ सहित)
अन्तिम १६ मा पराजित गरेको टिमः रियल मडिङ (५–३ गोल)
उच्च गोलकर्ताः डस्टान टाडिच (६)
युइएफए बरियताः ३
जारी सिजनको नतिजाः ५ खेलमा जित, ३ खेलमा बराबरी
अन्तिम १६ मा पराजित गरेको टिमः लियोन (५–१ गोल)
उच्च गोलकर्ताः लियोनल मेसी (८)
युइएफए बरियताः ५
जारी सिजनको नतिजाः ५ खेलमा जित तथा ३ खेलमा हार
अन्तिम १६ मा पराजित गरेको टिमः एट्लेटिको मड्रिड (३–२ गोल)
उच्च गोलकर्ताः पाउलो डिबाला (५)
युइएफए बरियताः १६
जारी सिजनको नतिजाः ४ खेलमा जित, १ खेलमा बराबरी तथा ३ खेलमा हार
अन्तिम १६ मा पराजित गरेको टिमः बार्यन म्युनिख (३–१ गोल)
उच्च गोलकर्ताः साडियो माने तथा मोहम्मद सलाह (३)
क्लबः म्यान्चेस्टर सिटी
युइएफए बरियताः ८
जारी सिजनको नतिजाः ६ खेलमा जित, १ खेलमा बराबरी तथा १ खेलमा हार
अन्तिम १६ मा पराजित गरेको टिमः साल्के (१०–२ गोल)
उच्च गोलकर्ताः सर्जियो अगुइरो (५)
क्लबः म्यान्चेस्टर युनाइटेड
युइएफए बरियताः १५
अन्तिम १६ मा पराजित गरेको टिमः पीएसजी (३–३ गोल भएपछि अवे गोलको आधारमा अघि बढेको)
उच्च गोलकर्ताः रोमेलु लुकाकु, पाउल पोग्बा, मार्कोस् रासफोर्ड (२)
युइएफए बरियताः ९
अन्तिम १६ मा पराजित गरेको टिमः रोमा (४–३ गोल)
उच्च गोलकर्ताः मोउरा मारेगा (६)
क्लबः टोटनहम हट्सपर
युइएफए बरियताः १८
जारी सिजनको नतिजाः ४ खेलमा जित, २ खेलमा बराबरी तथा २ खेलमा हार
अन्तिम १६ मा पराजित गरेको टिमः डर्टमण्ड (४–० गोल)
उच्च गोलकर्ताः ह्यारी केन (५)
क्वाटरफाइल ड्र शुक्रबार बेलुकी ४ः४५ बजे (नेपाली समयअनुसार) हुँदैछ ।
तपाईको परिवारमा कतै यस्तो समस्या त छैन ?
शुक्रबार किन गर्ने महाकालीको पुजा ?
एजेन्सी । शुक्रवार देवीको विभिन्न रुपका पूजा आरधाना गर्ने गरिन्छ । आज शुक्रबार कसरी महाकालीको पूजा र मन्त्र जप गर्ने त ?